Japàna (amin' ny fiteny japôney: 日本 Nippon na Nihon; anarana ôfisialy 日本国 Nihonkoku) dia firenena ao atsinanan'i Azia. Ireo firenena manodidina azy dia i Korea Atsimo sy Avaratra, Sina ary Rosia. Ireo nosy lehibe indrindra izay an'i Japana dia Honshu, Hokkaido, Kyushu ary Shikoku. Ao amin'ireo nosy efatra ireo ireo ny 97% ny mponina manontolon'i Japana, izay miisa 126 tapitrisa mponina. Tokyo izay manana isam-ponina 30 tapitrisa no renivohitra ary tanàna lehibe indrindra ao Japana ary eto amin'izao tontolo izao.
Miteny ny maribolana fa foaforona tamin'ny taonjato faha fito AJK ny Japana, ary ny mpanjaka Jimmu hono no namorona azy. Tafiditra tany japana ny fomba fanoratan'ny Japoney ankehitriny; ary ny pretra no nampiditra azy tany.
Tsy tena mitondra ny mpanjaka, any amin'ny tanan'ny andriana ny hasina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Japàna&oldid=1040747"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:38 ity pejy ity.